ग्रिल मा Kebab, पकाउने नुस्खा
परम्परागत पूर्वीय खाना Kebab ग्रिल, को नुस्खा जो धेरै थाह छ, यो पाठो पकाउन गर्न आवश्यक छ। तर अब यो कुनै पनि मासु र पनि तरकारी देखि बनेको छ। हाम्रो क्षेत्र पकवान छाँटकाँट अझै पनि धेरै रसदार र स्वादिष्ट बाहिर जान्छ। मुख्य कुरा प्रेम यसलाई पकाउन छ। हामी ग्रिल मा पकाउने Kebab सजिलो र रमाइलो बनाउन भनेर सबै subtleties पत्ता लगाउन प्रस्ताव। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा - यो प्रमुदित कम्पनी र राम्रो हास्य।
ग्रिल नुस्खा मा Kebab №1
वनस्पति तेल र तेल: 1 किलो, सानो बोसो - - - बारे 0.4 किलो,4लसुन लौंग, ब्रान्डी 20 एमएल र यस्तो तुलसी र thyme तेल रूपमा मसला र2प्रकार यो embodiment मा, हामी पोर्क प्रयोग गर्नेछ। पहिलो गोप्य - मासु हुनुपर्छ पूर्व-खटाई मा हालन, यो धन्यवाद यसलाई रसदार र कोमल हुनेछ। यो हामी सुरु हुनेछ। मासु लिन र मध्यम आकार को टुक्रा यसलाई काटे। मसला, कागति, ब्रान्डी र तेल समावेश जो एक marinade बनाउन। सबै राम्ररी मिश्रित र फ्रिज घण्टा एक जोडी मा राखे। अर्को, मासु, बेकन, प्याज र लसुन Mince, प्राथमिकताको धेरै पटक marinated। अर्को चरण - सिद्ध homogeneous भराई बनाउन। यसो गर्न, तपाईं राम्रो मुछ्नु, र त्यसपछि गर्न मासु बन्द पिटे आवश्यक छ। यी प्रक्रियाहरु यो मोटा हुन्छ कि केही समय को लागि Mince छोड्न पछि, हामी यो फ्रिज मा राखे। खाना पकाउने धेरै राम्रो हुनुपर्छ लागि कोइला न्यानो, आदर्श चेरी काठ वा ओक छ। ग्रिल मा Kebab, हामी भने जुन को नुस्खा रसदार र धेरै स्वादिष्ट बाहिर बारी हुनेछ।
हामी frying बारी। हात तातो पानी मा wetted र skewers मा strung जुन oblong patties, फारम गर्नुपर्छ। को भराई स्लाइड छ भने, meatballs सानो बनाउन। Skewers प्राय रस गुमाउनु थिएन मासु बारी गर्न आवश्यक छ। को Kebab सुक्खा र singed थिएन कि निश्चित गर्नुहोस्। तयार कीमा बनाएको मासु skewers तरकारी र जडीबुटी संग सेवा गरे।
पोर्क रसदार Kebab उत्तेजित गर्दछ, तर त्यहाँ एक थप आर्थिक विकल्प छ। यो प्रायः एक पकवान तयार गर्न अनुमति दिन्छ।
ग्रिल नुस्खा मा Kebab №2
अब हामी चिकन प्रयोग जाँदैछन् जसमा परिदृश्य विचार गर्नुहोस्।2किलो, प्याज -2 टाउको, एक सानो तुलसी, जीरा र सिरका, नुन को एक चुटकी, मरिच - boneless चिकन: हामीले निम्न उत्पादनहरु तयार गर्न आवश्यक छ। लिन2चमचा सिरका र तातो पानी को आधा कप यसलाई मिश्रण। प्याज कटा यो marinade खन्याउन। मामिलामा प्याज, तुलसी, जीरा र मसाले राख्नु जो चिकन, कीमा बनाएको। मुछ्नु र बीफ घृणा उत्पन्न, पन्नी मा र्याप र फ्रिज मा पठाउनुहोस्। पहिलो नुस्खा मा जस्तै तरिकामा भुट्नु। हामी सिकेका जो ग्रिल तयार Kebab नुस्खा ताजा तरकारी र अचार संग सेवा छ।
अब, यो समय यो न्यानो हुँदा, यो मित्र को धेरै आमन्त्रण र आफ्नो अद्भुत पकवान Kebab, जो तपाईं आफैलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ व्यवहार गर्न सजिलो छ हो। खाना पकाउने लागि, तपाईं मासु कुनै पनि अन्य प्रकार प्रयोग गर्न सक्छन्, नुस्खा नै रहनेछ। महत्वपूर्ण कुरा, मासु स्वाद र मसालेदार स्वाद दिन आफ्नो मनपर्ने मसला प्रयोग गर्नुहोस्। सामान्य मा, आगो, र प्रयोग बनाउन!
नुस्खा खरबुजा जाम - यो गर्मी को एक रिमाइन्डर
Echpochmak tartare। लागि नुस्खा
चिकन पाइ: स्तन, मासु र कलेजो संग
Multivarka "पानासोनिक" मा मासु पाइ। हरेक दिन को लागि स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
सुँगुर को Haunch: स्वादिष्ट खाना पकाउन के?
छिटो र स्वादिष्ट जौ कसरी खाना पकाउनु
अमेरिकी अभिनेता विलियम Petersen: जीवनी, पेसा र परिवार
विभिन्न कार्यक्रम प्रयोग गरेर कम्प्युटर मार्फत इन्स्टाग्राम फोटो अपलोड गर्न
को moonshine पार गर्न दोस्रो पटक रूपमा? वोदका पटक-पटक आसवन
Kosmodisk। उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू ज्यादातर सकारात्मक
चमकता गजेबो: स्थापना आधारभूत कदम
केकडा लाठी संग भरी स्वादिष्ट द्वारा पूछे जाने रोटी कसरी बनाउने?
विश्लेषण "गड्ढे" Platonov सारांश उत्पादन
Gerbera को गर्व सुन्दरता: बीउ बढ्दै
सजावटी तत्त्व रूपमा ढोका jamb
मनोविज्ञान मा आत्म-चेतना - यो छ ... चेतना कस्तो छ? अवधारणा परिभाषित
को परमाणविकन्यूक्लियस संरचना: को इतिहास र आधुनिक निर्दिष्टीकरण